Hiran State - News: Gudoomiyahii midowka maxkamadaha Islaamiga Hiiraan Cabdraxmaan Ibraahim Macowoo qorsheynaya inuu dalka Kenya
Gudoomiyahii midowka maxkamadaha Islaamiga Hiiraan Cabdraxmaan Ibraahim Macowoo qorsheynaya inuu dalka Kenya
Gudoomiyahii midowka maxkamadaha Gobolka Hiiraan Cabdraxmaan Ibraahim Macow oo qorsheynaya inuu si dhuumaasho ah uga baxo dalka Kenya kadib markii shirkada Xawaalada Amaana ee xafiiska Nariobi oo aheyd shirkadii Visaha u sameysay iyo isaga uu mugdi soo kala dhaxgalay.hadaba maxey tahay sababta iyo waxa leysku qoomay?
Inta aanan u guda galin warbixintaan aanu ka soo diyaarinay qilaaf soo kala dhaxgalay gudoomiyahii midowka maxkamadaha aIslaamiga gobolka Hiiraan amaba ninkii ka danbeyey masiibadii lagu dilay 100ka qofood ee reer Hiiraan-ka aheyd 2009 iyagoo qarax lagula eegtay bartamaha magalada Belet Weyne hadane markaad dhinaca kale ka eegto dalka Kenya waxa ku nool 80% hogaamiyaashii amaba horjoogayaashii maxkamadahii bur buray iyagoo waliba ganacsi fiican ay qaarkood ku heystaan.
Hadaba Maxa ka dhaxeeya Gudoomiyahii gobolka Hiiraan ee midowka maxkamadaha Islaamiga iyo shirkada Xawaalada Amaana xafiiskeeda Nariobi amaba guud ahaan maamulka shirkada?.
Hadaan ku hormarno Cabdiraxmaan Ibraahim Macow waa nin dhalinyaro ah waxuuna ku dhashay meel aan sidaas uga fogeyn magaalada Bulo Burde waxuu ka soo jeeday qoys u badan dad ahalu diin ah aabahii waxuu ahaa nin nabadeed oo wanaag iyo ixtiraam ku lahaa bushadii uu la noolaa xilikii uu noloshiisa inta badan ku qaatay magaalada Halgan iyo Bulo Burde.
Ibrahim Macow waxuu ahaa shaqsi midab furan oo markasta ku faraxsanaa nolosha caruurtiisa mid adag iyo mid wanagsanba xiligii ay caruurtu aad u yar yareen ayuu aad ugu dadaalay in caruurtiisu noqdaan kuwo ka horeeya caruurta kale ee reer Hiiraan hadey noqon laheyd, dhinaca tacliinta mid diin iyo mid maadi ahba.Alaha u naxariistee intii uu noolaa Ibrahim Macow waxuu ku dadaalay in aysan dhicin inba laga soo dacwoodo amaba ay dad dulmiyaan caruurtiisa.
Laakinse markaad aragto wanaaga iyo habka wanaagsan ee lagu soo koriyey gudoomiyahii midowka maxkamadaha Cabdiraxmaan Ibrahim Macow iyo sida waxkasta isku bedeleen kadib geeridii ku timid aabahii waxaa la dhihi karaa gudoomiyahii midowka maxkamdaha gobolka Hiiraan Cabdiraxmaan Ibraahim Macow shaqsi ka damiir xun, ka naxariis daran, ka xishood daran, ka dhiigya cabsan sooma marin reer Hiiraan inta tariikhda duugowday iyo mida cusuba laga xasuusto.
Hadaanse bulshada Hiiraan iyo dadka ay sida gooynida ah u taabaneyso xasuuqii Hiiraan ka dhacay ee waxgaradkii, dhaliyaradii, siyaasiyiintii,saraakiishii iyo waliba aqoonyahanadii lagu xasuuqay Hiiraan dulmarno iyo sida uu waxkasta ugu lug lahaa, waxaa kuu soo baxeysa in ninkani yahay dhiigyacab danbi weyn ka galay reer Hiiraan.
Ma dooneyno in aanu dib ugu laabano dhacdooyinkii iyo dhibaatadii lagala kulmay xiligii uu ka talinayey Hiiraan amaba ahaa gudoomiyaha Midowka maxkamadaha gobolka Hiiraan, laakisne waxaa ugu darneyd labo arimood oo dadka reer Hiiraan ay la sugayaan waqti munaasib ah waxana danbiyada uu bulshada Hiiraan ka galay ugu horeeya in uu maalin cad ka sii daayey xabsiga ragii dilay nabadoon Dacar Xersi Xooshow gudoomiyahii golaha dhaqanka gobolka Hiiraan. waxa kale oo lagu xasuustaa mudadii uu joogay amaba ka talinayey halkaasi marka loo tago oo la yiraahdo yaa dilay nabadoonka waxuu ku jawabayey baaritaan ayaa socda hadane waxa si isdaba joog ah loo dilay aqoonyahano, saraakiil dhaliyaro midkasta marka la weydiiyo oo la yiraahdo adigaa gobolkaan masuuliyadiisa sheeganaya ee yaa dadkan dilay waxuu ku jawabi jiray baaritaan ayaa socda ilaa markii danbe laga soo gaaro masiibadii Jun /18/2009 oo lagu dilay in ka badan 100 ruux oo reer Hiiraan ah oo ka mid ahaa qeybaha kala duwan ee bulshada.
Cabdiraxmaan Ibraahim Macow markii uu qaraxu dhacay telefonkii ugu horeye ee uu dibada u diro waxuu ku yiri nimankii waanu ka taqaalusinay oo uu ula jeeday Cumar Xaashi Aden iyo Amb Laqanyo arintaas faah faahinteeda marka waqtigeeda la gaaro ayey ku haboon tahay.
Hadaba waxa laga yaaba dad badan iney isleeyahiin maxaa ka dhaxeeya shirkada xawaalada Amaana Express iyo gudoomiyahii midowka maxaakiimta gobolka Hiiraan Cabdiraxmaan Ibraahim Macow?
Cabdiraxmaan Ibrahim Macow waxuu ka mid ahaa shaqaalaha shirkada Amaana ka hor intii aysan wadanka ka curan wadaadadii waalnaa ee la baxay midowka maxkamadaha Islaamiga maantana loogu yeero Shabaab, waxuuna ahaa shaqaalaha loogu yeero (Postman) oo marka dadka dibadaha jira ay lacag u diraan eheladooda ayuu guryaha ugu tagi jiray una soo sheegi jiray in ay lacagi u taalo xafiiska Amaana ee Suuqa bakaaraha.
Markii ay masiibadu dhacday ee intii uu ka ariminayey Hiiraan dadka lagu xasuuqayey meesha kaliya ee laga sacidayey waxey aheyd shirkada Amaana oo waligiiba masuuliyiinta shirkada qaarkood ayuu ku xirnaa hanti kasta oo u dhigtaba maamulka si guud ayey ula socdeen. sidaasi ay tahay markii Hiiraan ay ka soo ceyriyeen ururkii Hasan Daahir Aweys ee Xisbul Islaam ka hor intii uusan magalada Belet Weyne ku casuumin Caraale oo ahaa ninkii waxgaradkii lagu xasuuqay Hiiran ku tilaamay Gaalo dibna waxa dalka ka soo saaray shirkada Amaana walib ma suuliyiinta ugu sareysa iyagoo degaan kumeel gaar ah ugu sameeyey Hotel weyn oo ku yaala Hargeysa Somaliland isaga iyo mid ka mid ah xaaskiisa.
Qaabkee dalka Kenya lagu keenay Shiikh Macow?
Dalka Kenya waxa lagu keenay Viso ay u sameyeen shirkada Amaana masuuliyiintooda waxana Visahaasi uu ku kacay dhaqaalo lagu qiyaasay 1000 dolar madaama ay shiradu amaba dadkii sameyey ay doonayeen in Visaha dhaqso loogu soo saaro. hadaba waxa isweydiin leh muranka hada bilaawka ah ee soo kala dhax galay masuuliyiinta shirkada iyo Shiikh Macow halkuu salka ku hayaa.
Ma waxaa laga codsaday inuu wadanka ka baxo oo si qaldan ayaa lagu keenay? ma Visaha ayaa magac aan kii lagu yaqiinay aheyn loogu soo saaray? ma dhaqaalo shirkada ka yiilay ayaa laga xanibay? waxaasi dhan gadaal ayaanu shacabka uga soo faah faahin doonaa.
Heerka ganacsiga iyo dhaqaalaha uu maanta ku faano Shiikh Macow.
Macoow waxuu heystaa hanti ku filan waxuuna ganacsigiisa ka shaqeeyaa inta hada muuqata dalka South Africa waxaana ganacsigaas masuul uga ah mid ka mid ah wakiiladii shirkada Amaana ee Xafiiska London nin aanu hada magaciisa ku soo gaabin doono (AR) magaalada Bulo Burde iyo Belet Weyne waxuu ku leeyahay dhawr guri. dalka Kenya waxuu ku leeyahay amaba u yaala dhaqaalaha ugu badan oo iskugu jira cadaan (Cash) iyo ganacsi aanu ka xusi karno Hotel ku yaala xaafada ay Somalidu ku badan tahay ee Islii magaca Hotelka iyo raga shirada kula ah amaba fududeeyey la soco goor dhaw.waxaa kale oo uu ganacsi uga socdaa magaalada labaad ee ugu weyn Uk ganacsigaasi oo ku baxay dhaqaalo lagu qiyaasay 35 ilaa 40 kun oo Gini. inta badan aganacsigaani waxuu yimid waxii ka danbeyey xasuuqii jun/18/2009.
Hadaba su,aasha in leys weydiiyo u baahan mustaqbalka waxaa waaye gudoomiye Macow iyo qaar ka mid ah masuuliyiinta shirkada xawaalada Amaana midkeebaa danbiga ugu badan ka galay shacabka Hiiraan? jawaabta saxda ah waayaha iyo waqtiga ayaa kala saari doona dadkii sida gaarka ah looga xasuuqay waalidkood iyo kuwii dhibtaan geystay.
Hadaba inaga maxaa nooga galay in aanu ka hadlano dhacdooyinkaan murugada leh ujeedadu waxey tahay shaqsigii adiga 100 kaa dilay Somaliweyn iyo wadamada deriska la ahna berito kumanan qof ayuu ka xasuuqayaa kadibna reer hebel ayaan ahey iyo tolbeelay ayuu jiilka soo gorayo ku qaldayaa marka bulshada Somaliyeed si ay u noqdaan umad jirta oo la jaan qaadi karta bulshooyinka aduunka waa in ay kooda xun reer kasta iska soo saaro umadana u iftimiyo haduu yahay dhiigyacab iyo haduu yahay ganacsade intuba.
La soco wararkeena danbe iyo halka uu ku danbeyn doono qilaafkaan cusub ee soo kala dhex galay kuwii dulmiga bulshada iyo dhagarta heshiiska ku ahaa mudada.waxaa kale oo tasi ka sii daran ma doonayan inHiiraan loo helo maamul umada ugu adeega si daacad ah si loo helo nidaam iyo kala danbeyn.
· admin on November 13 2011 12:02:37 · 0 Comments · 3398 Reads ·
14,568,577 unique visits